Dalka Hindiya waxaa dood xooggan dhaliyay filim cusub oo ka hadlaya jacaylka dadka da' dhexaad ah. - BBC News Somali
Dalka Hindiya waxaa dood xooggan dhaliyay filim cusub oo ka hadlaya jacaylka dadka da' dhexaad ah.
Xigashada Sawirka, NFDC
Sanjay Mishra iyo Ekavali Khanna ayaa ku jilaya say iyo xaas
Filimkan oo lagu magacaabo Angrezi Mein Kehte Hain oo micnaheedu yahay (Afka Ingiriiska waxaa lagu dhahaa Waan Ku Jeclahay) ayaa waxa uu ku saabsanyahay lammaane wada jooga oo maraya da' dhexaadka, waxaana jirta in sayga uu guurka ku qanacsanyahay, balse xaas ay saygeeda ka rabto wax badan, sida jacayl iyo farxad galin.
Filimka Sanju: Ma ka been sheegayaa mise waa ka run sheegayaa nolosha Sanjay Dutt?
Madaxweynaha Faransiiska oo filim jillay
"Waxaa jira wax aan qoysaskeena ka dhaxalnay, qof kastaba xushmad ayuu u hayaa kan kale, balse ma jiro qof jacayl u muujin kara lammaanihiisa" ayuu yiri Mishra.
Gabadha Barta iyo wiilka uu sodogga u yahay ayaa garab ka siinaya in uu xaaskiisa farxad galiyo (sida ay filimka ku jilayaan)
Waxaa jirta in filimka uu qirayo in jiilka hadda jooga iyo kii hore ay aad u kala duwanyihiin, tusaale ah da'yarta hadda joogta waxa ay ku qanacsanyihiin in ay muujistaan jacaylkooda, halka waalidkood markii ay dhalinyarada ahaayeen ay ceeb ahayd ama laga xishoon jiray in jacaylka la muujisto.
TOOS Wadahalladda xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaliland oo aan natiijo laga gaarin
Ninka Ciraaqiga ah ee khaarijin rabay George W Bush'